Waxaa la xaqiijiyay in maamulka Aala-Sucuud uu xabsiga dhigay mid kamid ah culimada isaga taageersaneyd, ahaana imaamka masjidka kacbada ee sharafta leh. Xisaab ka furan barta twitterka oo ku caan baxay soo gudbinta wararka la xiriira maxaabiista cusub ee sanadkan uu maamulka Aala-Sucuud xiray ayaa xaqiijiyay in xabsiga la dhigay sheekh Bandar bin Cabdil-Caziiz, oo ahaa imaamka Masjidka kacbada. Waxaa ...	Read More »
Daadad ay dad badani ku dhinteen oo ku dhuftay dalka Fillibiin.
Wadanka Fillibiin ee dhaca qaaradda Asia waxaa ku dhuftay daadad xoogan oo geystay khasaare isugu jira jirta mid nafeed iyo mid dhaqaale. Duufaantan oo loogu magacdaray Mankot ayaa ku dhufatay qeybo badan oo kamid ah jaziiradaha dalka Fillibiin, iyadoona ay ku barakaceen kumanaan ruux. Mas’uul la hadlay warbaahinta, oo katirsan xukuumadda Fillibiin ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan 25 ...	Read More »
Yahuuda Oo Sawaariikh ku garaacay magaalada Dimishiq ee caasimadda Suuriya.
Habeennimadii xalay, dhawaqa sawaariikh iyo madaafiic xoogan ayaa laga maqlay gudaha magaalada Dimishiq ee caasimadda Suuriya, halkaas oo uu gacanta ku hayo maamulka Bashaar Al-Asad. Goobjogayaal ayaa wakaaladaha caalamiga ah u sheegay iney arkeen ileyska ama iftiinka qaraxyo xoogan oo ka dhashey sawaariikh ay soo rideen diyaaradaha maamulka Yahuudda. Duqeymaha waxaa lagu garaacay hareeraha garoonka diyaaradaha ee magaalada Dimishiq, halkaas ...	Read More »
Saraakiil ku le’day diyaarad dagaal oo lagu soo riday Afqaanistaan.
Dalka Afqaanistaan waxaa lagu soo riday diyaarad dagaal oo ay lahayd xukuumadda taagta daran ee fadhigeedu yahay magaala madaxda Kaabul. Ciidamada difaaca cirka ee Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa ku guuleystay iney dhulka soo dhigaan diyaarad nooca dagaalka ah oo ay la socdeen saraakiil katirsan ciidamada xukuumadda Kaabul. Diyaaradda ayaa lagu soo riday degmada Khaak-safiid oo kamid ah degmooyinka wilaayada ...	Read More »
Maydad iyo Hub ay ka carareen ciidamo huwan ah oo lagu soo bandhigay Mubaarak.
Deegaanka Mubaarak ee wilaayada islaamiga ee Shabeellaha hoose oo dhawaan uu ka dhacay weerar fashilmey oo ciidamada Maraykanka ku doonayeen iney ka geystaan halkaas ayaa waxaa lagu soo bandhigay meydad iyo saanad milliteri. Meydka Askari soomaali ah oo ay ugu buufsantahay Gaashaan ayaa kamid ahaa meydadka lagu soo bandhigay deegaanka Mubaarak Dhanka hubka, waxaa lasoo bandhigay saanad kala duwan oo ...	Read More »
Dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 05-01-1440
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka wuxuu kamid yahay barnamijyada todobaadla ah ee ka baxa Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan, waxaana looga faalloodaa arimaha Caalamka Islaamka. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 14-09-2018 Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 14-09-2018.lite	Read More »
Mu’assasada warbaahineed ee As-saxaab ayaa baahisay bayaan kasoo baxay hogaanka sare ee Al-Qaacida, kaas oo loogu tacsiyeynayo guud ahaan umadda islaamka geeridii dhawaan ku timid Sheekh Mowlawi Jalaalu-diin Xaqqaani. Bayaankan oo ka kooban labo Beyj, waxaa qoyska sheekha uu ka dhintay, Imaarada islaamiga Afqaanistaan iyo guud ahaan umadda islaamkaba looga tacziyeeyay geerida sheekha, iyadoona lagu soo gudbiyay qeyb kamid ah ...	Read More »
DEG-DEG: Weerar ay dad ku dhinteen oo ka dhacay dalka Maraykanka.
Wararka saaka oo Khamiis ah ka imaanaya dalka Maraykanka waxay sheegayaan in dalkaas uu ka dhacay weerar hubeysan oo dhaliyay khasaare nafeed. Qof hubeysan ayaa rasaas ooda kaga qaaday dad Ameericaan ah oo ku sugnaa gobolkla California ee Maraykanka, wuxuuna dilay dhowr ruux. War kasoo baxay Police-ka Maraykanka waxaa lagu sheegay in ugu yaraan shan ruux ay ku dhinteen weerarkan ...	Read More »
Wararka ka imaanaya dalka Afqaanistaan ayaa tibaaxaya in dagaallo culus uu marti geliyay gobolka Meydaan wardak, kaas oo dhexmaray ciidamada Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan iyo kuwa xukuumadda Kaabul. Dagaallada oo dhowr maalmood socday waxay xoogeeda ka dheceen degmada Jalqa ee gobolka Meydaan Wardak, waxaana labada dhianc ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaa u suuragashey ciidamada Dhaalibaan iney gebi ...	Read More »
Dowladda Jarmalka oo kamid ah wadamada dhaca qaaradda Yurub, ayaa ku fakareysa iney ciidamo geyso wadanka Suuriya, halkaas oo todobo sano uu ka socdo dagaallo looga soo horjeedo Nidaamka Bashaar Al-asad. Afhayeen u hadlay xukuumadda Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in Jarmalka ay wado wadahadallo ay la yeelaneyso xulafadeeda Maraykanka iyo Yurub, kuwaas oo looga hadlayo suuragalnimada in ciidamo ka ...	Read More »